November 2019 – Page3– " कञ्चनजंगा News "
काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कर्मचारीहरुसँग घुस खाएर सरुवा, बढुवा गर्ने काममा मन्त्रीहरु आफैं संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डल हेरफेर …
भक्तपुर– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपाको सरकारले सीमा सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् । चाँगुनारायणमा आज चुनावी कार्यक्रममा उनले जनताले सीमा …
अक्षय कुमार र करीना कपूर स्टारर फिल्म ‘गुड न्यूज’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्ममा कियारा आडवाणी र दिलजीत दोसाँझको पनि शीर्ष भूमिका छ । करण जोहर प्रोडक्सनले बनाएको यो …
अष्ट्रेलियाः आगोसँग लड्ने २३ वर्षीया गर्भवती युवती
अष्ट्रेलियामा २३ वर्षीया महिला गर्भवती हुँदा हुँदै पनि आगोसँग लड्नका लागि अग्नि नियन्त्रकको रुपमा स्वेच्छिक रुपमा काम गरेकी छिन् । क्याट रोबिन्सन विलियम्स यतिबेला १४ हप्ताकी गर्भवती छिन् । तर अग्नि …
अष्ट्रेलियामा २३ वर्षीया महिला गर्भवती हुँदा हुँदै पनि आगोसँग लड्नका लागि अग्नि नियन्त्रकको रुपमा स्वेच्छिक रुपमा काम गरेकी छिन् । क्याट रोबिन्सन विलियम्स यतिबेला १४ हप्ताकी गर्भवती छिन् । तर अग्नि नियन्त्रक (फायर फाइटर) को भूमिकामा अष्ट्रेलियाको जंगलमा फैलिएको भयानक आगोसँग उनी बहादुरीका साथ लडिरहेकी छिन् ।
विलियम्सका अनुसार उनका थुप्रै साथीहरु उनको यो निर्णयका कारण चिन्तित छन् र उनलाई यस्तो नगर्न सुझाइरहेका छन् । उनले इन्स्टाग्राममा एउटा पोष्ट लेख्दै यस्तो स्थितीमा उनी ‘चुपचाप लागेर पछाडि बस्न नसक्ने’ बताएकी छिन् । रोबिन्सन विलियम्स पछिल्लो ११ वर्षदेखि आगो नियन्त्रणका लागि भोलुन्टियरको रुपमा काम गर्न न्यू साउथ वेल्स रुरल फायर सर्भिससँग आबद्ध छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘अग्निनियन्त्रक कर्मचारी गर्भवती भएको यो पहिलो घटना होइन न नै यो अन्तिम हुनेछ । म अहिले पनि अरुको मद्दत गर्न सक्षम छु त्यसकारण यसो गरिरहेकी छु ।’
अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको आगोले अहिलेसम्म तीनजनाको ज्यान लिएको छ भने दुईसय बढी घर जलेर खरानी भएका छन् । ‘अरुले के सोच्छ, मलाई त्यसको कुनै मतलब छैन’ रोबिन्सन विलियम्सले सोमबार इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो पोष्ट गरेकी छिन् जसमा उनले अग्निनियन्त्रक गियर लगाएका थुप्रै तस्बिर साझा गरेकी छिन् ।
पोष्टमा एउटा क्याप्सन पनि लेखिएको थियो, ‘हो, म अग्निनियन्त्रक कर्मचारी हुँ । म एक पुरुष होइन । हो, म गर्भवती छु । यदि तपाईंलाई मैले यस्तो गरिरहेको मन परेको छैन भने मलाई कुनै मतलब छैन ।’ उनको पोष्टलाई मानिसहरुले निकै समर्थन पनि गरिरहेका छन् जसमा कतिले उनलाई ‘सबै महिलाका लागि प्रेरणा’ पनि बताएका छन् ।
उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनका थुप्रै साथीहरुले उनको कामका लागि आपत्ति जनाएपछि यस्तो तस्बिर सार्वजनिक गरेको बताएकी छिन् । ‘म उनीहरुलाई यो बताउन चाहन्छु कि म ठिक छु र अब कुनै पनि हालतमा रोकिने छैन । जब मलाई मेरो शरीरले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ, त्यसपछि मात्रै विश्राम लिन्छु ।’
उनलाई डाक्टरले पनि यसका लागि अनुमती दिएको बताएकी छिन् । तर डाक्टरले सही उपकरण लगाइरहन सल्लाह दिएको बताइन् । रोबिन्सन विलियम्स चाइल्डकेयरमा काम गर्छिन् । उनका तीन पीढिले अग्निनियन्त्रणका लागि भोलिन्टियर गर्दै आएका छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मेरी आमाले पनि सन् १९९५ मा भएको आगलागीका क्रममा अग्निनियन्त्रकको रुपमा भोलिन्टियर गरेकी थिइन् र त्यतिबेला उनी पनि गर्भवती थिइन् । हाम्रो परिवारमा यो एक प्रकारको परम्परा जस्तो भएको छ ।’ ‘जब म सानी थिएँ तब मेरी हजुरआमाले मेरो नापको एउटा फायर फाइटर ड्रेस पनि बनाएकी थिइन् ।’
रोबिन्सन विलियम्स भन्छिन्, ‘यो परिवारको एउटा परम्पराजस्तो हो, हामीले उहिल्यैदेखि यस्तो काम गर्दै आएका छौं । मेरी हजुरआमा अहिले पनि भोलुन्टियर गरिरहेकी छिन् । उनले ५० वर्षसम्म यो काम गरिन् र मेरी आमाले ३० वर्षदेखि यो काम गर्दै आएकी छिन् ।’
रोबिन्सन विलियम्सका श्रीमान् र घरका अन्य सदस्य पनि अग्निनियन्त्रकको रुपमा भोलुन्टिर गरिरहेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई आशा छ कि मेरो बच्चाले पनि यो काम गर्नेछ । यद्यपि, यो निर्णय उसको आफ्नै हुनेछ ।’
गो निभाउने क्रममा डर लाग्दैन ? बीबीसीको प्रश्नमा रोबिन्सनले तत्काल जवाफ फर्काइन्, ‘अहँ, कति पनि लाग्दैन। उनी भन्छिन्, ‘म हिजो पनि एउटा भयानक आगोको बीचमा थिएँ । त्यहाँका घर नराम्रोसँग जलिरहेका थिए । हामी यसलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेका थियौं । यो एउटा यस्तो काम हो जुन म निकै अघिदेखि गर्दै आएकी छु ।’
न्यू साउथ वेल्स राज्यमा लगभग साठी लाख मानिसको बसोबास छ । अधिकारीले अग्निनियन्त्रक कर्मचारी यो भयानक डढेलोमाथि नियन्त्रण पाउने कोसिस गरिरहेका छन् । बुधबार यो डढेलो सिड्नीको उपनगरीय इलाकामा पनि फैलिएको छ ।
काठमाडाैं, २८ कात्तिक । अस्ट्रेलियाका दुई राज्यले नेपाली विषयलाई आफ्नो सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन् । अहिले न्यु साउथ वेल्सका दुई र दक्षिण अस्ट्रेलियाका तीन सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषा ऐच्छिक विषयका …
विधवा आमाका लागि पति खोज्दै गौरव –’एक्ली आमालाई साथी चाहियो’
काठमाडौँ – भारतको पश्चिम बंगालको हुगली जिल्लाका गौरव अधिकारी नामका एक युवाले आफ्नो ५० वर्षकी विधवा आमाको लागि योग्य पति खोजेका छन् । गौरवको बुवाको निधन ५ वर्ष अघि नै भएको …
काठमाडौँ – भारतको पश्चिम बंगालको हुगली जिल्लाका गौरव अधिकारी नामका एक युवाले आफ्नो ५० वर्षकी विधवा आमाको लागि योग्य पति खोजेका छन् ।
गौरवको बुवाको निधन ५ वर्ष अघि नै भएको थियो । त्यसपछि उनको ४५ वर्षीय आमा घरमा एक्लै बस्ने गरेकी थिइन् । गौरवले आफ्नो आमाको लागि सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत श्रीमान् खोजेका हुन् ।
‘मेरो बुवा कुल्टीमा नोकरी गर्नुहुन्थ्यो,’ फेसबुक पोस्टमा गौरवले भनेका छन्, ‘२०१४ मा बुवाको निधनपश्चात मेरी आमा एक्लै हुनुभयो । म आमाबुवाको एक्लो सन्तान हुँ । म बिहान ७ बजे अफिसका लागि निस्किन्छु र राति मात्र फर्किन्छु । मेरी आमा पूरै दिन एक्लै बस्नुहुन्छ । मलाई महशुस हुन्छ कि आमालाई साथीको जरुरत छ ।’
के यस्तो लेख्नुभन्दा पहिला गौरवले आफ्नी आमासँग कुरा गरेका थिए ?
गौरवले भारतीय संचारमाध्यमहरूलाई सुनाए, ‘मैले आमासँग कुरा गरेको थिएँ । आमाले मेरो बारेमा सोचिरहनु भएको थियो । मलाइ पनि आमाको बारेमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । एउटा सन्तान भएर मैले मेरो आमा यो भन्दा राम्रो जीवन जिउनुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गल्ती गरेको छैन ।’
गौरवले फेसबुकमा यस्तो पोस्ट गरेपछि धेरैले उनको आमासँग विवाह गर्ने इच्छा भएको भन्दै फोन गर्ने गरेका छन् । तिनमा कोही डाक्टर र इन्जिनीयर पनि छन् ।
डोको बुनेर मासिक ४० हजार कमाई
स्याङ्जा । स्याङजा कालिगण्डकी गाउँपालिकाका दामबहादुर गाहा उमेर ढल्किदै जाँदा समेत हरेक दिन डोको बुन्ने काम गर्छन् । युवा पुस्ताको आकर्षण हराएको यो पेशाबाट उनले राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् …
स्याङ्जा । स्याङजा कालिगण्डकी गाउँपालिकाका दामबहादुर गाहा उमेर ढल्किदै जाँदा समेत हरेक दिन डोको बुन्ने काम गर्छन् । युवा पुस्ताको आकर्षण हराएको यो पेशाबाट उनले राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् ।
हेर्दा समान्य लाग्छ डोको बुन्ने काम् । गाउँघरतिर निकै प्रयोगमा आउने डोकोे पछिल्लो समय बुन्ने मान्छेको अभावले उत्पादन नै हुन छाडेको छ । स्थानीय बाँसबाट डोको बुन्न सकिन्छ । डोको गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि खपत हुन्छ । त्यसैले डोको बुन्ने उद्योग सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी कमाउन पनि सकिन्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन् । तर स्याङ्जा कालिगण्डकी गाउँपालिकाका दामबहादुर गाहा डोको बुनेरै मासिक चालिस हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । उनले बुनेको डोको एकवटाको ५ देखि ६ सय रुपैयाँ पर्छ ।
दैनिक ४ देखि ५ वटा सम्म डोको, थुम्से तथा स्याखी बुन्न सक्छन उनले । यही डोको बुन्ने कामबाट उनले जो कोही वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भन्दा कम कमाउँदैनन् । त्यसैले त उनको परिवार राम्रैसँग चलेको छ । डोको खरिद गर्न ग्राहकहरु घरमै आउने भएकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । उनले बुनेको डोको, सुपो, डालो लगायतका सामाग्री पाल्पा, बुटवल सम्म विक्री गरेको छ । यससँगै उनले कलात्मक डाली पनि बुन्ने गरेका छन् । बाँसबाट निर्मित बस्तुलाई अझ बढी कलात्मक दिने उदेश्यले उनले विभिन्न प्रजातिका बाँस समेत रोपेका छन् ।
बाँसबाट निर्मित कलात्मक बस्तुको माग बढ्दै गर्दा नयाँ पुस्ता भने यसपेशा तर्फ आकर्षित छैनन् । युवाहरु गाउँमै केही गर्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृतिले गर्दा पुराना मौलिक कलात्मक वस्तुहरु उत्पादन गर्नेकाम लोपहुँदै गएको छ ।
सुँगुरको मुटु मान्छेमा लगाइने
एजेन्सी– बेलायतका वैज्ञानिकहरुले सुँगुरको मुटु मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्न सम्भव भएको बताएका छन् । उनीहरुले आगामी तीन वर्षभित्र मान्छेको शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुने दावी गरेका हुन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार …
एजेन्सी– बेलायतका वैज्ञानिकहरुले सुँगुरको मुटु मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्न सम्भव भएको बताएका छन् । उनीहरुले आगामी तीन वर्षभित्र मान्छेको शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुने दावी गरेका हुन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो परीक्षण पूर्व मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरिने छ । यदि यो परीक्षण सफल भएको खण्डमा मुटुको प्रत्यारोपण पनि सम्भव हुने छ । ४० वर्षअघि पहिलोपटक मुटु प्रत्यारोपणमा सफलता हात पारेका बेलायतका डाक्टर टेरेन्स इंग्लिसले मान्छेको शरीरमा सुँगुरको मुटु राख्ने तयारी गरेका हुन् ।
डा टेरेन्सले यसै वर्षको अन्ततिर उनका सहयोगी डाक्टरहरुले सुँगुरको मिर्गौला मान्छेको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने छन् । यो प्रयोग सफल भएमा मुटु प्रत्यारोपण पनि सम्भव र सफल हुने उनको भनाइ छ ।
डा. टेरेन्सकाअनुसार सुँगुरको अंग मानिसमा प्रत्यारोपण गर्नुको पछाडि मान्छेको शरीर भित्रको अंग र सुँगुरको भित्री अंगहरु उस्तै हुन्छन् । यसैले सुँगुरलाई मानिसका लागि उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
जनावरको अंग मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्ने विषय विवादित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । पशु अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, यसबाट थुप्रै फाइदा मिल्नेछ । मुख्य भनेको यसबाट मान्छेलाई अकालमै मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिनेछ ।
पछिल्लो समय विश्वभरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अंग प्रत्यारोपणको माग बढ्दै गएको देखिन्छ । बेलायतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने २८० जना मुटु रोगीहरु प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन् । त्यसैले यो परीक्षण सफल भएमा मेडिकल इतिहासमा ठूलो उपलब्धि हात पर्ने निश्चित छ ।
यो विषयबाहिर आइरहँदा यसअघि पनि जनावरको अंग ल्याबमा उत्पादन गर्न प्रयोगहरु भइरहेको चर्चा चल्ने गरेको थियो । यसका साथै हालै जापान सरकारले पनि विवादास्पद एक कानून पारित गरेको छ । उक्त कानूनमा मान्छे र जनावरको हाइब्रिड अंगहरु ल्याबमा उत्पादन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
काठमाडौँ । बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई १५ वर्षीय बालिका आफन्तबाटै बेचिएको खुलासा भएको छ । काठमाडौँको एक होटलमा काम गर्दै गर्दा आफन्त पर्ने नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–६ घर भई …
काठमाडौँ । बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई १५ वर्षीय बालिका आफन्तबाटै बेचिएको खुलासा भएको छ । काठमाडौँको एक होटलमा काम गर्दै गर्दा आफन्त पर्ने नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–६ घर भई हाल ललितपुरको चापागाउँ बस्ने कान्छी तामाङ (सुनिता तामाङ) भन्ने कृष्णमाया लामाले बालिकालाई पढाई दिने प्रलोभनमा पारेर भारतमा बेचेको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।
मेगनको रातो पहिरनले तहल्का ( १० तस्वीर सहित )
बेलायती टेलिभिजन रियालिटी शो लभ आइल्याण्डकी २४ वर्षीय मेगन ब्राटन हानसन ‘एक्ट्रिमली विक्ड, सकिङ्ग्ली एभिल एण्ड भाइल’ नाम ड्रामा सिरिजको प्रमियरमा बोल्ड अवतारमा देखा परिन् । लण्डनमा आयोजित प्रिमियरमा उनी स्किनटाइट …
बेलायती टेलिभिजन रियालिटी शो लभ आइल्याण्डकी २४ वर्षीय मेगन ब्राटन हानसन ‘एक्ट्रिमली विक्ड, सकिङ्ग्ली एभिल एण्ड भाइल’ नाम ड्रामा सिरिजको प्रमियरमा बोल्ड अवतारमा देखा परिन् ।
लण्डनमा आयोजित प्रिमियरमा उनी स्किनटाइट रातो कपडामा देखा परेकी हुन् । उनले लगाएका कपडा सम्हाल्न समेत उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । यसकारण उनले आफ्नो पहिरन बेलाबेला मिलाइरहनु परेको थियो ।
पहिरन मिलाउने क्रममा प्रिमियर कार्यक्रममा आफ्नो वक्षस्थल दुई हातले छोपेपछि प्रिमियरमा उपस्थित सबैको ध्यान उनी तर्फ आकर्षित भएको डेलीमेलले जनाएको छ ।
यसअघि प्लाष्टिक सर्जरी गरेर राम्री बनेको भन्दै आलोचनाको शिकार भएकी उनले पछिल्लो समय प्लाष्टिक सर्जरीले आफूलाई अझ खुशी बनाएको बताउँदै आएकी छिन् ।
धार्मिक मान्यता अनुसार हप्ताका सात दिनमा सातै किसिमको महत्व छ । अन्य बारजस्तै बिहीबारलाई पनि धार्मिक महत्वको दिनका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने …
६ वर्षको मेहनतपछि २० इन्चको कम्मर (फोटो फिचर)
एजेन्सी– सुन्दर र आकर्षक शरीर बनाउन जो कोही रुचाउँछन् । अझ मोडलहरु आफूलाई मोटोपन हुनबाट टाढा राख्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् । एक भनेजुएलाकी मोडल एलेइरा एजेन्डानोले पनि आफ्नो शरी बनाउन …
एजेन्सी– सुन्दर र आकर्षक शरीर बनाउन जो कोही रुचाउँछन् । अझ मोडलहरु आफूलाई मोटोपन हुनबाट टाढा राख्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् ।
एक भनेजुएलाकी मोडल एलेइरा एजेन्डानोले पनि आफ्नो शरी बनाउन ६ वर्ष मेहनत गरिन् । अहिले उनको शारीरिक बनावट देखेर जो कोही अचम्मित पर्छन् । उनका शरिरका अन्य अंग मोटो भए पनि कम्मर भने निकै पातलो छ ।
कम्मर घटाउन उनले ६ बर्षसम्म मेहनत गरेकी हुन् । अन्य युवतीभन्दा फरक देखिन उनको इच्छा थियो । यही इच्छाअनुसार उनले कम्मर घटाउन थालेकी हुन् ।
उनको कम्मरको साइज २० इन्च छ । कम्मर घटाउनका लागि उनले दैनिक २३ घण्टा कसिलो (टाइट) कपडा लगाउथिन् । साथै उनले २० पटक भन्दा बढी सर्जरी समेत गराएकी छन् ।
बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गरिन्छ । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान …